Maalinta Dunidu U Asteysay Afka Hooyo – 21 February - Anti Tribalism Movement : The ATM
Maalinta Dunidu U Asteysay Afka Hooyo – 21 February
Sanad waliba waxaa dunida aan ku noolnahay ka dhaca munaasabado kala duwan oo lagu xuso ama loogu dabaal-dego maalmaha taariikhiga u ah dadweynaha kala duwan ee ku kala nool adduunka oo dhan.
Waxaa jira maalmo u gaar ah diimaha, dhaqamada, taariikhaha dalalka, aas-aaska ururada, astaanta maalmaha horumarka qowmiyadaha, dabaal-dega maalmaha xoriyadda ee wadamada iyo xuska munaasabadaha gaarka ah ee dadka oo dhan ka dhaxeeya ee ay ka mid tahay maalinta ay dunidu u asteysay “Maalinta Afka Hooyo” oo ku began 21 February ee sanad waliba.
Dhallinyarada Kacdoonka Ka Soo Horjeedka Qabyaaladda (Anti – Tribalism Movement) waxa ay dadaal dheer ugu jiraan sidii Afka Soomaaligu u noqon lahaa mid ay ku hadlaan, qoraan ayna aqriyaan dadka Soomaaliyeed meel waliba oo ay joogaan, gaar ahaan caruurta Soomaaliyeed oo ah ubixii berito ee dalka iyo dadka Soomaaliyeed.
Waxa aan dunida oo dhan la wadaageynaa dadaalka loogu jiro sidii loo illaalin lahaa Afafka kala duwan, looguna dhiiri-gellin lahaa bulshada dal waliba sidii ay u dhowri lahaayeen Afka ay ku hadlaan. Waxa aan si gaar ah xooga u saari doonaa Afka Soomaaliga oo ah Af leh xarfo, erayo iyo suugaan hodan ah. Waana mid ka mid ah tiirarka aas-aasiga ah ee mideeya dadka Soomaaliyeed.
Waxa aan mas’uuliyiinta heer deegaan iyo gobol ee gudaha dalka iyo dhammaan shaqaalaha Wasaaradda Waxbarashada, maamulada Iskuulada, Jaamacadaha iyo goobaha wax lagu barto aan ka codsanaynaa inay hormuud u noqdaan sidii loo heli lahaa nidaam waxbarasho oo dhammaan maadooyinka lagu qaadanayo Afka Soomaaliga. Waxaana mar waliba muhiim ah in xooga la saaro caruurta si ay u bartaan Afka Soomaaliga, Insha’Allah. Mahadsanidiin